Dowladda Uganda oo Soomaaliya kala baxday 2,100 Askari - Awdinle Online
Dowladda Uganda oo Soomaaliya kala baxday 2,100 Askari
Dalka Uganda waxaa tagay Kooxda 27-aad qaybta 6-aad ee ciidamada difaaca dalkaas ee ku howlgala Magaca Ururka Midowga Afrika ee AMISOM, kadib markii ay dhameysteen sanad ay joogeen Soomaaliya.
Dowladda Uganda ayaa sheegtay in tirada Askartaan ay gaareyso 2100-Askari kuwaas oo Khamiistii tagay Xarun la dejiyo Ciidamada soo guta waajibaadka nabad ilaalinta sida Dowladdu ay hadalka u dhigtay.
Munaasabad lagu dhiira-gelinayo Askartaan & saraakiisha hoggaamineysa waxaa ka qaybgalay Taliye ku xigeenka Ciidamada Difaaca Uganda ee loosoo gaabiyo UPDF-da waxaana la dejiyay Degmada Nakaseke.
“Aniga oo ku hadlaya Magaceyga & kan Taliyaha waxa aan idinku bogaadinayaa doorka wanaagsan aad ka qaadateen howsha nabad ilaalinta Soomaaliya oo aad soo gudateen, waan idinku faanaa marwaiba” Sidaasi waxaa yiri Gen Wilson Mbasu Mbadi Taliye ku xigeenka Ciidamada Difaaca Uganda.
Saraakiisha Ciidamada Uganda ayaa sidoo kale amaan kala dul dhacay ilaalada Qaramada Midoobay ee xiran Koofida Buluugga ah kuwaas oo ay dirtay Xukuumadda Kampala si ay u sugaan ammaanka Xafiiska Howlgalka QM ee Soomaaliya & madaxda ku shaqeysa.
Taliye ku xigeenka Ciidamada Uganda Gen Mbadi ayaa sheegay in Askarta Uganda la karaantiilayo muddo labo todobaad ah si loo xaqiijiyo haddii uu ku dhacay xannuunka Covid-19 & in ay ka badqabaan.
Mid kamid ah saraakiisha Uganda dib ugu laabatay oo lagu magacaabo Korneyl Sam Kuesa ayaa sheegay in qaybta 27-aad ee Ciidamada Difaaca Uganda ay ku guuleysteen howlgalo ay ka fuliyeen Shabeelaha Hoose gaar ahaan Sabiid Caanoole, Bariire, Ceel Saliini, Awdheegle & Janaale.
Waxa uu bogaadiyay Ciidamada Xoogga Soomaaliya ee kala shaqeeyay fulinta howlgalka ka dhanka Al-Shabaab ee looga saaray deegaannada kor ku xusan ee katirsan Gobolka Shabeelaha Hoose DG koofur Galbeed.
Previous articleGalmudug oo ku dhawaaqday dagaal ka dhan ah Al-Shabaab
Next articleDagaal xoogan oo dhex-maray Ciidamada dowladda iyo Al-Shabaab